विराटनगर- प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले इञ्जिनीयरहरूले प्रदेशको पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरीय कार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल इञ्जिनीयर्स एशोसिएशन प्रदेश नं १ द्वारा शुक्रवार साँझ विराटनगरमा आयोजित ५७ औं इञ्जिनीयर्स दिवसको अवसरमा उनले प्रदेशले पूर्वाधार विकासमा ठूलो बजेट रकम छुट्याएकाले नमूना प्रदेश बनाउन सरकारसँग हातेमालो गर्न आग्रह गरे ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारले चाँडै नै विज्ञ सम्मेलनको आयोजना गरी ठोस योजना बनाए पश्चात लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने बताए ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले महानगरमा छात्रावास सहितको एउटा प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने जानकारी दिँदै गुणस्तरीय कार्यबाट सुशासन कायम हुने विचार व्यक्त गरे ।
प्रदेश सदस्य जयराम यादवले इञ्जिनीयरले दैवीप्रकोपलाई ध्यानमा राखी विकास निर्माणका कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । एशोसिएशनका प्रदेश अध्यक्ष यशवन्त विक्रम शाह, पूर्वाञ्चल इञ्जिनीयर क्याम्पस धरानका प्रमुख ओमप्रकाश ढकाल, पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष ध्रुव थापा, मनोज घिमिरेले इञ्जिनीयर पूर्वाधार विकासका मेरुदण्ड भएको विचार व्यक्त गरे ।
नेपालमा ५२ हजार इञ्जिनीयर दर्ता रहेकोमा हाल स्वदेशमा ३६ हजार कार्यरत रहेका छन् ।
स्कूल विभागमा अन्तत: ईश्वर पोखरेलले मारे बाजी
बादललाई राजकीय मामला विभाग, बिनालाई खानेपानी !
भ्रष्टाचार बढेको नभई अख्तियार सक्रिय भएको होः मन्त्री बाँस्कोटा
कश्मीरमा उत्पन्न संकटलाई कसरी बुझ्ने ? पूरा पढ्नुहोस
त्रिवि उपकुलपति छान्न सकस, शक्तिकेन्द्रमा धाउनेहरूको चर्काे दबाब काठमाडौँ। विश्वविद्यालयमा उपकुलपति छनोट कार्य निकै सकसपूर्ण बनेको छ । उपकुलपति छनोट गर्न साउन १८ गते गठन भएको ‘सर्च कमिटी’ले पहिलोपटक पाएको एक साताको समयावधि गुज्रिए...
सैनिक कल्याणकारी कोषमा पैसा थुप्रियो
नास्तिक देश चीन- किन कुनै धर्म मान्दैन ?
चितवनमा प्रदर्शन गर्ने ५ जना पक्राउ, ग्रह र ताराको नाम अब नेपालीमा
चीनले सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग बनाउन थाल्यो
नेकपामा शक्तिशाली बने वामदेव